လိပ်ဥချောင်းရွာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 11°19′51″N 98°43′50″E﻿ / ﻿11.33083°N 98.73056°E﻿ / 11.33083; 98.73056ကိုဩဒိနိတ်: 11°19′51″N 98°43′50″E﻿ / ﻿11.33083°N 98.73056°E﻿ / 11.33083; 98.73056
လိပ်ဥချောင်းကျေးရွာသည် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းခရိုင်အတွင်းရှိ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် အုန်းတောကမ်း ကျေးရွာအုပ်စု တွင် ပါဝင်သော ရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ အက်ဒမန်ပင်လယ် တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်း ကမ်းခြေပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ မြန်မာလူမျိုး ၊ ယိုးဒယား နွယ်ဖွား ရှမ်းလူမျိုးနှင့်မလေးရှားနွယ်ဖွား ပသျှူးလူမျိုး တို့နေထိုင်ကြသည်။
အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံမှာကွမ်းသီးနှင့် သီဟိုရ်သရက်ဖြစ်ပြီး ရာသီပေါ်ဒူးရင်း၊ ကြက်မောက်နှင့် မင်းကွတ်အစရှိသည့် အသီးအနှံများကိုလဲ စားသုံးရန် စိုက်ပျိုးကြသည်။ တံငါလုပ်ငန်း ပင်လယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူအချို့လဲ ရှိကြသည်။
လိပ်ဥချောင်းကျေးရွာသည် ဗမာပိုင်း နှင့် (ယိုးဒယားနွယ်ဖွား) ရှမ်းပိုင်းဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားပြီး ၁.၅ စတုရန်းမိုင် (၃.၉ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) ခန့်ကျယ်ဝန်းသည်။
↑ (မေ ၂၀၁၇) ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ, ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ. နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန။
↑ (မတ် ၂၀၁၇) ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ. ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လိပ်ဥချောင်းရွာ&oldid=504717" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၆:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။